Pôrnôgrafia sy ny tsy fahampiana ara-piraisana | Ny valin'ny Fanamarinana
Home Momba anay Pôrnôgrafia sy ny tsy fahampian-tsakaiza
Ny TRF dia manolotra atrikasa momba ny RCGP Accredited
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny tsy fetezana eo amin'ny lahy sy ny vavy ianao dia mankanesa ao amin'ny atrikasa misy an'io anarana io ihany. Nahazo fankatoavana avy amin'ny Royal College of General Practitioners izy io. Ny atrikasa dia mitaky isa CPD 7 ho an'ny atrikasa mandritra ny tontolo andro ary isa 4 ho an'ny kinova antsasak'adiny. Hita manodidina ny UK sy ny Repoblikan'i Irlandy izy io. Mba miangavy re fifandraisana izahay raha te handre bebe kokoa momba ny atrikasa ho avy na handamina hetsika any amin'ny faritra misy anao. Efa nanatitra an'ity fampiofanana ity izahay mihoatra ny 20 fotoana.
Ny fanaterana ity atrikasa ity dia naato nandritra ny faharetan'ny areti-mandringana Covid.
Ny tsy fetezan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto dia mitombo haingana noho ny fikoropahana ara-piraisana ara-nofo. Izany dia mifanaraka amin'ny fampiasana finday bebe kokoa sy ny fahafahana miditra mora kokoa amin'ny lahatsary mivelatra ao anatin'ny taona 10. Niteraka olana maro momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana izany. Ohatra, fitomboana mihenjana amin'ny fikolokoloana an-tsokosoko amin'ny zatovolahy, ny porofo maneho ny fahafaham-pon'ny lahy sy ny vavy am-bohoka, ary ny tebiteby ara-tsosialy sy ny dysmorphia ara-tsosialy amin'ny tanora dia toa mifandray amin'io tranga ara-kolontsaina io.
Ireo mpitsabo dia mila mahatsapa ny porofo manohana ny maodely fiankinan-doha. Misy safidy fitsaboana mahomby ankehitriny sy fanasitranana izay manatsara ny fahasitranana ao anatin'izany ny fanoratana ara-tsosialy mahomby.
Ity atrikasa ifotony ity dia hanome fampidirana ny fianinan'ny fiankinan-doha amin'ny ankapobeny ary ny fampiasana pôrnôgrafia amin'ny Internet manokana, miorina amin'ny fikarohana farany. Hijery ireo karazana fahasalamana ara-pahasalamana sy toe-pahasalamana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny fampiasana porno nipoitra avy amin'ny fikarohana. Hamporisika ny fifanakalozan-kevitra hisaintsaina eo amin'ireo mpitsabo momba ny fampiharana tsara indrindra, ny fanatsarana azo atao ary ny safidy fanarenana eo amin'ny signpost.
Atrikasa manontolo andro momba ny pôrnôgrafia sy ny firaisana ara-nofo
Tsy manana atrikasa mandritra ny andro manontolo izahay izao noho ny areti-mifindra Coronavirus, fa misokatra kosa izahay amin'ny soso-kevitra momba ny fotoana sy ny toerana mety ahitanao izany.
09.00 - Fampidirana ny pôrnôgrafia amin'ny Internet, The Great Porn Experiment, ny famaritana an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ara-nofo, ICD-11 ary fikorontanan-tsaina mamoa fady, modely fiankinan-doha ary maodelin'ny ati-doha, ny fomban'ny fitondran-tenan'ny mpampiasa ary ny fiakaran'ny fitaovana matanjaka kokoa
10.30 - Tapaka
10.45 - Ny fampiasana sary vetaveta sy ny loza mety hitranga - ny fiantraikan'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, ao anatin'izany ny fihenan'ny firaisana ara-nofo ho an'ny tanora, lehilahy sy vehivavy. Resadresaka ifanaovan'ny vondrona kely, manontany ny mpanjifa momba ny fampiasana sary vetaveta, avy eo ny fifanakalozan-kevitra ataon'ny vondrona iray manontolo. Fomban'ny fampiasana tanora, fitondran-tena maloto, fanovana endrika fitondran-tena eo amin'ny fiaraha-monina, olana ara-pahasalamana, fanararaotana ara-nofo ataon'ny ankizy, fihenan-tena amin'ny filan'ny nofo ary sary vetaveta amin'ny herisetra an-tokantrano. Q & A session.
13.00 - Sakafo atoandro
14.00 - Ny fampiasana sary vetaveta sy ny resaka fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny fitsapana ny olan'ny mpampiasa ary ny fanomezana loharano hanohanana ny fahaizany miady. Ny pôrnôgrafia dia olana momba ny fomba fiainana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQI + sy MSM, ny comorbidities, ny chemsex, ny safidy fitsaboana, ny Scale momba ny fampiasana sary vetaveta manahirana, ny vondrom-piarahamonina fanarenana an-tserasera ary ny asa sosialy. Resadresaka ifanaovan'ny vondrona.
15.15 - Tapaka
15.30 - Fanarenana sy fisorohana - Firy ve ny pôrnôgrafia? Safidy fitsaboana sy fanabeazana, fiankinan-doha, fisintomana, 'fisosirana', fahatsiarovan-tena, CBT ary fitsaboana zava-mahadomelina. Mifarana izahay amin'ny fananganana fahatakarana ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fampiharana ara-pahasalamana anao.
16.20 - Fanombanana ary akaiky.
Mary Sharpe no mpanorina sy seza amin'ny asa fanabeazana The Reward Foundation - Fitiavana, firaisana ary Internet. Izy dia naneho ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ho an'ireo matihanina amin'ny fahasalamana, ny fahamarinana ara-dalàna ary ny fanabeazana ary amin'ireo sekoly nandritra ny 5 taona lasa izay. Mary dia mpikambana ao amin'ny Birao an'ny Fikambanana ho an'ny Fivoaran'ny Fahasalamana ara-pananahana any Etazonia nanomboka tamin'ny 2016 ka 2019.
Niorina tao amin'ny University of Cambridge nandritra ny folo taona i Mary. Tao no nanaovany fikarohana momba ny programa Science Science for Peace and Security. Reporter momba ny siansa tao amin'ny Cambridge-MIT Institute izy. Ity dia asa efa nataony taloha tao amin'ny Vaomiera Eoropeana any Bruxelles. Izy koa dia nampianatra ireo mpianatra sy mpiasa tamin'ny fanohanana ny tampon'isa amin'ny alàlan'ny atrikasa momba ny fahaiza-manao amin'ny fiainana sy ny fitantanana ny adin-tsaina. tamin'ny taona 2020 dia niverina tany amin'ny Oniversiten'i Cambridge i Mary ho mpitsidika mpitsidika ao amin'ny Lucy Cavendish College. Mary dia nampanao lalàna amin'ny maha mpisolovava sy mpisolo vava azy nandritra ny 15 taona mahery. Namoaka lafiny maro amin'ny fahasalamana, firaisana ara-nofo ary lalàna izy ary niresaka tamin'ny kaonferansa manerantany. Ankafiziny ny fampianarana mivantana sy ny fifanakalozan-kevitra. Misy tantaram-piainan'i Maria misimisy kokoa momba izany Eto.
Darryl Mead PhD dia manam-pahaizana amin'ny Internet ary mpikaroka amin'ny indostrian'ny pôrnôgrafia. Amin'ny andraikiny amin'ny maha Chief Executive Officer of The Reward Foundation dia mifantoka amin'ny fiantraikan'ny sary vetaveta amin'ny fitondran-tena eo amin'ny tanora sy ny olon-dehibe izy. Darryl dia mamolavola ny valin'ny politika maoderina momba ny fanamby ara-pahasalamana noforonina tamin'ny fampielezana ny pôrnôgrafia mijaly noho ny fijerena fialamboly faobe. Amin'ny maha mpanatanteraka ambony azy ao amin'ny National Library of Skotlandia, dia nanampy tamin'ny fametrahana ny rafitra izay ampiasain'ny UK amin'ny fitahirizana ny Internet. Mpampianatra manana traikefa, izy dia nitazona ny andraikitra teo aloha ho toy ny mpandray anjara amin'ny siantifika ary matihanina fampahalalana momba ny vaovao (FCLIP).
Fanontaniana? Fanontaniana hafa? Azafady mba mifandraisa amin'ny The Reward Reward amin'ny alàlan'ny mailaka: info@rewardfoundation.org na finday: 07506475204.